Andro manerantany ho an’ny sembana tany Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2008 19:52 GMT
Marihana manerantany ho andro iadiana amin'ny SIDA ny 1 Desambra ary dia dradradradraina fatratra ho fantatry ny rehetra izany. Tsy mba tahaka ny fijerin'izao tontolo izao ny andro iadiana amin'ny SIDA, fa saiky tsy hita tabilao amin'ny fampahalalam-baovao manerana izao tontolo izao ny andro manerantany ho an'ny sembana.
Faribolan'ny mpinamana avy amin'ny mpampiasa ny Flickr Jimee, Jackie, Tom ary Asha ary mizaka ny lalanan'ny creative commons license
Marihina isaky ny 3 desambra isan-taona ny andro fanajana ny fandraisana anjara birikin'ny manana fahasembanan'ny vatana na ny saina ho an'ity tontolo iainantsika ity. Ho an'i Azia Atsimo, dia misy fanalam-baraka mahery vaika araikitra amin'izay manana fahasembanana na ara-batana io na ara-tsaina. Ny Andro manerantany ho an'ny sembana no fotoana fanararaotra hampahafantarana ny zon'ny sembana sy ilazana fa tsy fahotana na natao hahamenatra tsy akory fananany toe-batana na toetr'endrika sahala ny an'izy ireny.
Any India ny mpikatroka Javed Abidi, ilay mpisolovavan'ny mpitaky ny zon'ny manana fahasembanana malaza indrindra any an-toerana no hitarika fihetsiketsehana iray antsoina hoe “Dilli Chalo” na “Andeha isika ho any Delhi” hanamarihana ity fotoana ity. Hotontosaina eo amin'ny vavahady manantantaran'i India moa izany.
Miteny i Mr. Abidi fa efa misy fivoarana ny fanajana ny zon'ny sembana any India saingy mbola betsaka ny zavatra mbola tokony hatao.
“Ankehitriny moa eto India araka ny fantatsika rahateo dia 12 taona izay no nananana ny Fanambarana ny zon'ny sembana. Nieriteritra isika fa fotoandehibe tokoa iny taona lasa iny noho ireto antony roa ireto. Voalohany dia nanasoania ny fifaneken'ny Firenena Mikambana ny firenentsika, ary ny faharoa dia nahazo ny XI Plan isika. Sambany ao ao amin'ny XI Plan… no misy toko na fizarana miavaka tsara momba ny fahasembanana. Ary dia nieritreritra isika fa hisy ny fiovana… Raha todihantsika indray izany tamin'ny herintaona izany, dia hahatsikaritra isika fa tsy araka izay nantenaintsika ny fiovana hita…”
Miara-dalana amin'ny filazana ny resaka lalàna mikasika ny zon'ny sembana sy ny fahamendrehana antonona azy izany, dia mbola mila ezaka be ihany koa ny fanampiana ireo ianjadian'ny fahantrana noho ny toe-batany.
Vaovao iray notaterin'ny The National no nilaza ny fiangavian'ny olona mahantra manana fahasembanana ny fitondrana mba handray fepetra hiantohana azy ireo fa afa-miaina amin'ny mahaolona azy izy ireo.
Shaikh Azizur Rahman no nitatitra fa nisy ray efa antitra izay, tamin'ny volana novambra, mpikarakara ny zanany vavy roa tsy afa-miala eo ampandriana noho ny fahasembanana lehibe ananany, mangataka amin'ny Filoha Indiana hahazoany alalana “hamarana ny fijalian'izy ireo”. Miteny izy fa mahantra loatra ka tsy afa-mikarakara intsony ny zanany vavy izay mila fikarakarana sy fikolokoloana fatratra isa-minitra. Fatema, iray amin'ny zanany vavy, no niteny koa fa te-hamarana ny androny izy.
Imbetsaka aho no niteny tamin'ny raiko mba hitondrana poizina ho ahy fa tsy misy mety manampy ahy hamonoako ny tenako
Hiampita sisintany isika ho any Pakistan, mbola tendrombohitra no manakana ny (fanomezana zo ny) olona manana fahasembanana any. Manoratra ho an'i Dawn (ny maraina), i Zahid Abdullah, izay miasa ho an'ny Foibe ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana any Islamabad, no miteny fa mbola lavitra ny lalana aleha mba hananan'ireo “manana fahafaha-manao hafa (tsy mitovy amin'ny mahazatra)” ny hajany eo anivon'ny fiarah-monina. Malahelo tokoa izy fa mikisaka dia mikisaka loatra ny fanavaozana ny lalàna mikasika ny zon'ny sembana.
Mihevitra tahaka ny any India sy Pakistan koa ny fiaraha-monina Nepaley fa noho ny fahotana nataony tany aloha tany no mahatonga ny olona hanana fahasembanana eo amin'ny toe-batana na eo amin'ny saina. Karakaraina ho ambany noho ny olona hatrany ny sembana; voafetra dia voafetra tokoa ny fahazoan'izy ireny fanabeazana sy asa misy lanjany. Matetika dia hitanao mangataka eny an-dalana ny olona iray manana fahasembanana mba hiadiany ho amin'ny fiainana.
Manoratra i Meen Raj Panthi fa maro ny fianakaviana no manafina izay manana fahasembanana hiarovana ny voninahiny sy ny hajany
Tsy hita ao amin'ny fomba fisainan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny izany hoe manana zo sy adidy mitovy amin'ny olona salama tsy nanombinana ihany koa ny olona manana fahasembanana
Nyankizy no tena andairan'ny fanavakavahana. National Disabled and Helpless Upliftment Association na fikambanana manao izay hampiakarana ny fiainan'ny olona manana fahasembanana sy mila fanampiana any Nepal no maka ho ohatra ny zazavavy kely iray antsoina hoe Manisha gadrain'ny ray aman-dreniny satria jamba izy:
Rehefa hiasa any an-tsaha ny ray aman-dreniny dia hidiany ao an-trano izy sady fatorany tady satria tsy misy hikarakara azy ao an-trano. Ary ny zokiny lahy sy vavy kosa dia mianatra any an-tsekoly.
Kisary hajia avy amin'ny mpampiasa ny Flickr Shizhao ary manana ny alalan'ny creative commons license
Fahalalahàna miteny 16 ora izay